Iingcebiso zokuFumana, ukuThuthwa, nokuSebenzisa iHlabathi elomileyo ngokukhuselekileyo
Uhlobo olomeleleyo lwe-carbon dioxide lubizwa ngokuba yiqhwa elomileyo. Iqhwa elomileyo ngumxube ogqithiseleyo wenkohlakalo , ukuqhuma kwentlaka , kunye nezinye iziphumo ezinobungozi ! Nangona kunjalo, kufuneka ukwazi ukuthutha, ukugcina, nokusebenzisa iqhwa elomileyo ngaphambi kokuba ulifumene. Nazi izicwangciso zokukunceda ukugcina ukhuselekile.
Indlela yokufumana kunye nezothutho i-Ice Ice
Unokufumana iqhwa elomileyo kwiivenkile zokutya okanye iinkampani zegesi. Kubalulekile ukuba ulungele ukuthutha iqhwa elomileyo ngaphambi kokuba ulithenge.
Oku kuya kunceda ukuhlala ixesha elide kwaye ukhusele izingozi.
Cwangcisa ukufumana i-ice eyomileyo eyaneleyo. Iyakunciphisa isantya kwiiyure ezilishumi ukuya kwiiyure ezingama-24 nganye (malunga ne-pellets okanye i-chips), ngoko ke ukuba awuyi kusebenzisa i-ice eyomileyo kwangoko, cwangcisa ukulahlekelwa kwemveliso. Isantya sesincinci sincike kwiindawo ezibonakalayo. I-dry pellets eyomileyo iya kuguqula igazi ngokukhawuleza kunokuba yinto eqinile yeqhwa elomileyo.
Yenza ibhokisi elipholileyo okanye ibhokisi lebhodibhodi. Injongo yakho kukungenisa iqhwa elomileyo kwiindawo ezifudumele. Kwakhona kunceda ukuba ube neengubo okanye ibhegi yokulala ukuze uphonkceze isitya ukukhusela kwiinguqu zokushisa.
Ngokuqhelekileyo iqhwa eliseqiniweyo lidayiswa kwiibhegi zephepha. Beka isikhwama sephepha ngaphakathi kwebhokisi okanye epholile. Vala isiqhonkco ukuze unqande iqhwa elomileyo, kodwa qinisekisa ukuba ayifaki . Oku kubalulekile, kuba iqhwa elomileyo lihlengahlengayo kwindlela yalo eqinile ibe yi-carbon dioxide umphunga. Igesi yakha uxinzelelo kwaye ingabangela ukuqhuma ukuba ayinayo indlela yokubaleka.
Njengoko i-sublimation yenzeka, izinga le-carbon dioxide kwisithuthi liya kuphakama. Qinisekisa ukuba umoya omtsha ujikeleza kwisithuthi ukukhusela i-carbon dioxide yetyhefu .
Ukugcina i-Dry Ice
Indlela efanelekileyo yokugcina iqhwa elomileyo ipholile. Kwakhona, qiniseka ukuba ipholile ayifakwanga. Unako ukongeza ukukhutshwa ngokugqithiswa ngokuphindwe kabini kwiqhekeza zamaphepha kunye nokufaka iphosta ebhokheni.
Kungcono ukuba ugwebe ukubeka iqhwa elomileyo kwifriji okanye efrijini kuba ubushushu obushushu bubangela ukuba i-thermostat yakho ishintshe umbane, i-carbon dioxide amazinga ayakha ngaphakathi ngaphakathi, kwaye ingcinezelo yegesi inokunyanzela ukuvula umnyango weso sicelo.
Ukusebenzisa Iqhwa elomileyo ngokukhuselekileyo
I-2 imigaqo apha (1) ungagcini iqhwa elomileyo kwisitya esitywinwe kwaye (2) ugweme ukuqhagamshelana ngqo kwesikhumba. Iqhwa elomileyo libandayo kakhulu (-109.3 ° F okanye -78.5 ° C), ngoko ukuchukumisa kungabangela i-frostbite.
Sebenzisa iiglavu okanye iimbotyi zokusingatha iqhwa elomileyo.
Qaphela ukuba i-carbon carbon dioxide iyancipha, ngoko ingozi evela kwi-carbon dioxide eninzi kakhulu kufuphi nomhlaba okanye nakwephi na indawo edibeneyo. Qinisekisa ukuba kukho ukujikelezwa komoya okulungileyo.
Ukuba usebenzisa iqhwa elomileyo kwiziphuzo ukuvelisa inkungu, qaphela ukuba awuyi kutyumba iqhekeza leqhwa leqhwa. Ukungena kwiqhwa elomileyo yinkxalabo yezokwelapha ngenxa yomonakalo wesisu ngokugquma kwamaqabunga kunye noxinzelelo lwexinzelelo ekukhutshweni kwegesi. Iqhwa elomileyo lidibanisa kwiglasi okanye isitya, ngoko ke ingozi yokutya ingokwemvelo iphantsi kakhulu. Nangona kunjalo, ungavumeli abantu abaxubileyo ukuba baphuze i-cocktails eyomileyo okanye sebenze ngeqhwa elomileyo.
Indlela Yokuphatha Ukushisa Kweqhwa Elomileyo
Yiphatha iqhwa elomileyo livutha ngendlela efanayo njengoko unokuyiphatha isithwathwa okanye utshise ekushiseni.
Indawo ebomvu iya kuphilisa ngokukhawuleza (imini okanye ezimbini). Unokufaka isicelo sokutshisa ioli kunye ne-bandage, kodwa kuphela ukuba ummandla ufuna ukugqutywa (umz., I-blister evulekile). Kwiimeko zeqabunga ezinzima, khangela unyango (oku kuqhelekanga).
Iingcebiso eziNinzi zokuKhusela kwiSiqhumane
Ungalokothi ushiye abantwana okanye izilwanyana ezingenakulinganiswa kwiqhwa elomileyo.
Qaphela izibonakaliso ze-carbon dioxide ubuthi kwaye qinisekisa ukuba kukho ukuhanjiswa kwemoya elungileyo apho kusetyenziswa i-ice emile kwaye igcinwe. Ngokuqhelekileyo, amanqanaba aphakamileyo ye-carbon dioxide ayinayo ingozi enkulu yempilo . Amanqanaba e-carbon dioxide aphezulu kakhulu ukuba abe phezulu kakhulu emhlabathini.
Ukuba usebenzisa iqhwa elomileyo ukukhalisa ukutya, uya kufumana iziphumo ezilungileyo xa ubeka iqhwa elomileyo phezu kokutya. Oku kubangelwa ukutshisa okubandayo.
Gwema ukubeka iqhwa elomileyo ngokukhawuleza kwiinqumle eziphezulu okanye ukubeka kwiibhagi ezingenalutho. Ukutshatyalazwa kweqondo lokushisa kungaqhekeza izinto.
Ezinye iinqwelo-moya ziya kukuvumela ukuba uthwale iqhwa elomileyo, kodwa ingabi ngaphezu kwe-2 kilogram. Lindela iqhwa elomileyo ukuba linciphise ngesantya ngokukhawuleza kunokuba siqhele ukuba ingcinezelo yekhampani ingaba ngaphantsi koxinzelelo oluqhelekileyo. Pake iqhwa elomileyo ngephepha elinamaphepha okanye ingubo yokunciphisa ilahleko.
IWartburg College Admissions
Ukusebenzisa i-German Dative Reflexive kunye Neengxenye zeBhunga
Umdaniso kwi-Oldies Ngezo zigugu zeMculo ze-Shag